Frenkie de Jong oo markii ugu horreysay ka hadlay sii joogista Lionel Messi ee Kooxda Barcelona – Gool FM
(Barcelona) 05 Seb 2020. Lionel Messi ayaa sii joogaya Kooxda Barcelona, iyadoo Frenkie de Jong uu markii ugu horreysay ka hadlay arrintan oo uu sheegay inay tahay wax lagu farxo in xiddiga ugu wanaagsan Adduunka uu sii joogo Camp Nou.
Weeraryahankan ayaan shaaca ka qaaday Jimcihii inuu sii joogayo kooxda Barcelona kaddib markii uu soo gudbistay codsi ahaa in la fasaxo oo uu doonayo inuu isaga tago Camp Nou.
Haddaba De Jong ayaa wax laga weydiiyey arrintaan isagoo ku guda jira waajibaadka qarankiisa Holland, waxaana uu sheegay inuu ku faraxsan yahay in kabtan Messi uu sii joogo Barcelona.
“Aad ayaan ugu farraxsanahay inuu isagu sii joogo” ayuu De Jong u sheegay TV-ga Holland ee NOS.
“Isagu waa kan ugu fiican Adduunka.
“Xaqiiqda ah inuu sii joogayo Barcelona waa wax lagu farxo.
“Waan ku faraxsanahay inuu ku soo laabto kooxda, isla markaana uu la shaqeeyo kooxda.”
De Jong ma uusan doonaynin inuu dhexda ka galo dagaalka Barcelona iyo carada Messi, waxaana mar wax laga weydiiyey arrintaas uu yiri: “Waxa uu ahaa wax u dhaxeeya Messi iyo kooxda, waxaanan kala socday meel fog.”